Awoodaha ciidamada Kenya ku yeelanaan AMISOM & mushaaraadka askari kasta – SBC
Awoodaha ciidamada Kenya ku yeelanaan AMISOM & mushaaraadka askari kasta
Ciidamada Kenya ee gudaha u soo galey Soomaaliya bishii October ee sanadkii hore ayaa haatan waxay ku biirayaan hawlgalka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM waxaana ay hoos tagi doonaan taliska sare ee ciidamadaasi.
Kenya waxay ku yeelan doontaa 16 darjooyin sar sare hawlgalka ciidamada AMISOM waxaana darajadaasi ugu sareynaysa kuxigeenka taliyaha AMISOM.
Shir maalinimadii Isniintii ka dhacay magaalada Adis Ababa ee caasimada Itoobiya oo ay isagu yimaadeen taliyaasha ciidamada wadamada gobolka ayaa waxaa la isla qaatey ciidan kasta oo ka socda wadamada ciidamadu ka joogaan ee ku mideysan AMISOM hawlala iyo waajibaadka ay kala qaadanayaan, iyadoo sidoo kale jagooyinka sar sare lagu kala qaybsadey kulankaasi.
Taliyaha guud ee ciidamada AMISOM ayaa ka imaan doona sidii caadada aheyd Ugandha waxaana kuxigeennu u noqonaya sarkaal ka socda Kenya iyo mid kale oo ka socda Burundi, iyadoo guud ahaan taliska ciidamada AMISOM ee Muqdisho ay ka hawlgalayaan 85 saraakiil Military kuwaasi oo 16 ka mid ah noqonayaan Kiinyaati.
Taliyaha guud ee ciidamada Kenya Julius Karangi ayaa sheegay in shirkaasi la isku raacay in afar qaybood loo qaybinayo hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya, isagoo sheegay in Kenya ay qaadanayo dhanka Koonfureed gaar ahaan wabiga Jubba.
“Ogolaanshaha AMISOM haysato waa mid ah inay ilaaliso nabadda laakiin maba jirto nabad la ilaaliyo gudaha Soomaaliya, halka aynu istaagnay markii ay ka gudubnay xuduuda Soomaaliya sanadkii tagey waxay tagaan tahay halkeedii si la mid ah cirka, dhulka iyo badda” ayuu yiri Julius Karangi.
Ciidamada Kenya waxay kaloo masuul ka noqon doonaan hawlaha sirdoonka iyo warbixinada ciidamada AMISOM sida la isku raacay shirkaasi ka dhacay Adis Ababa, iyadoo Kenya ay ka imaanayaan 4660 (Afar kun lix boqol iyo lixdan) askari
Taliyaha guud ee ciidamada Kenya Julius Karangi waxaa kale oo uu ku nuuxnuuxsadey in ciidamada Kenya askari kasta oo ka hawlgalaya Soomaaliya uu heli doono mushaar dheeraad ah bishii gaaraya 84,398 (Sideetan iyo afar kun sadex boqol sagaashan iyo sideed) lacagta Kenyaatiga ah oo u dhiganta 1,028 (Kun labaatan iyo sideed doolar).